घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीज ब्राजिल फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ; "फ्रेड"। हाम्रो फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पुरा खाताको मितिको लागि पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र अन्य अफ-पिच तथ्याङ्कहरू (उनको बारेमा धेरै चिन्ता) अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो बक्सको बारेमा मिडियाफुल क्षमताको बारेमा जान्दछन्। तथापि, फ्रेडको जैवका बारेमा मात्र केहि हातहरू धेरै रोचक छ भनेर धेरै थाहा छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम फ्रेडेरियो Rodrigues de Paula Santos हो। नाम 'फ्रेड' एक उपनाम हो। फ्र्रेड मार्च5को 1993th मा आफ्नो आमाबाबु को जन्म भयो; (आमा; रोजीला मिरांडा डे पाउला) र (बुबा; डेल्सन रड्रिज डोस सैंटोस) बेल बेल होरिजिन्ट, मिनस गेरैस, ब्राजिलमा।
फ्रेड फुटबल जडानको साथ विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। उहाँले आफ्नो जीवन निजी राख्नुहुन्छ, सानो तिनका नातेदारहरू, भाइहरू र बहिनीको बारेमा चिनिन्छ। तथापि, अफवाह छ कि फ्रेड परिवार ब्राजीली र बार्सिलोना को परिवार संग सम्बन्धित छ, रोनाल्डिन्हो.
फ्रेड फुटबल समुदायमा हुर्कियो त्यहाँ एक खुट्टामा फुटबल हुँदा खालीपन समाप्त हुन्छ। एक सम्भावना उनीहरूको सपना एक पेशेवर फुटबलर बन्न पुगेको थियो र उनको महत्वाकांक्षाहरू मात्र एक गुप्त कल्पना थिएन।
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
बन्द गर्न, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ कि फ्रेड फुटबलमा सहयोग गरिएको थियो रोनाल्डिन्होभाइ, रोबेटो डी एसिइस तल चित्रित छ।
फ्रेड 10 मा 1993 उमेर मा Atlético Mineiro मा आफ्नो फुटबल यात्रा शुरू गर्यो। यो पनि थाहा पाउन उल्लेखनीय छ कि रोबर्टो डी एसिज जसले एक कारागार (जेलमा केही समय बिताएको छ) एक जना वृद्ध र ठूलो भाइ हो रोनाल्डिन्हो.
आफ्नो युवा क्यारियरको दौडमा समापन पछि, रोबर्टो डे एसिजको सहयोगमा फ्रेड आफैले थप अनुभव लिन र यूरोपको लागि तयारी गर्न अन्य क्लबमा स्थानान्तरण गर्यो। 2009 मा, पोर्टे एलेग्रेमा सामेल हुनुभयो, एक क्लब जसले उनलाई आफ्नो बायाँ फिर्ता फिर्ता मिडफाल्डबाट परिवर्तन गर्यो। फ्रेड अन्तर्गत 2011 मा इन्नेन्टेक्सेली मा आफ्नो युवा क्यारियर को अंतिम चरणहरु मा बसे, एक कदम अझै पनि द्वारा समर्थित रोनाल्डिन्होको भाइ रोबर्टो डी एसिइस। क्लबमा आफ्नो वरिष्ठ क्यारियरको सिजन पछि, शख्त डोनेट्स्कका युरोपेली स्काउट्सले उनलाई स्थानान्तरण गरे फर्नान्डोहो जो मैनचेस्टर सिटी गए।
यूक्रेनमा, ब्राजिल मिडफिल्डरले नाशक र सृष्टिकर्ताको रूपमा सहज महसूस गरे। उनले एक रोमाञ्चक र आक्रामक आक्रमणकारी इकाईको भाग बनाए। यो विशेषताले मैनचेस्टर यूनाइटेडलाई तिनलाई 2018 मा अधिग्रहण गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फुटबल एक सुनहरा रूख हो, एक ठाउँ जहाँ लाखौं युवाहरु छायाबाट टाढा छन् कम भुक्तानी व्यवसायहरुको वास्तविकता। फ्रेडको लागि, फुटबल एक सुनको रूख हो जसले त्यसले प्रेम पाएको छ। फ्रेडको गर्लफ्रेंड मोनिकल सालम एक संदेह बिना छ, हेर्न को लागी एक इनामयुक्त प्राकृतिक सुन्दरता।
उनको Instagram पृष्ठ मा, ब्राजीली ऐस एक पल्ट एक पल्ट प्रकट भयो उनको प्रेम प्रेमिका को प्रेम मा आकर्षित भयो। उनले पद पढेको पद; "हामी केवल हाम्रो पागलपन बुझ्दछौ। माया मात्र।" फ्रेडको प्रेमिका मोनिक सलम छ तिनको लागि धेरै मानिसका पागल चित्रहरू पाइन्छ।
फ्रेडले एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस प्रयोग गरेको छ उनको प्रेमिकाको तस्वीर उनको लागि उनको प्रेमको प्रशंसा गर्न।
पोष्टमा फ्रेडले भने:
"अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र म सबै महिलाहरू र विशेष गरी ती व्यक्तिहरूलाई मेरो पक्षले बधाई दिन्छ र मेरो जीवनको महिला कौन हो, तपाईले सबै कामको लागि धन्यवाद र मेरो लागि गरेको छ। यो माया
फुटपाथको पक्षमा, दुबै प्रेमी बास्केटबलका प्रशंसक हुन्। ओर्लान्डो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा खेल हेर्न पछि जोडे को एक फोटो हो।
फ्रेड र मोनिकको रास्तेबाट निर्णय गर्दै आफैलाई छन्, यो केवल प्रस्ताव को समय भन्दा मात्र हो। कसलाई थाँहा छ! ... फिंगर क्रस गरिएको !!
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको एजेन्ट
सायद, तपाईं सोच्न सक्नुहुनेछ फ्रेड को एजेन्ट अन्य भन्दा बढी छैन रोनाल्डिन्होको ठूलो भाई, रोबर्टो डे एसिइस तथ्य हो कि त्यो त्यहाँ उनको लागि सबै तरिका हो। दुर्भाग्यवश, तिमी गलत छौ! शस्त्रागार मिडफील्ड किंवदंती गिलबर्टो सिल्वा लेखन को समयमा फुटबल एजेन्ट मा मामला मा फ्रेड को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
गिलबर्टो सिल्वा फ्रेड को एक संरक्षक र एजेन्ट दुवै हो। गेलबर्टो एक पटक फ्रेडको भने;
"मैले फ्रेडसँग काम सुरु गरें, किनकि उहाँ मेरो लागि एक ठूलो चुनौती हो, किनकि यो मेरो प्रशिक्षक, निजी कोच र एजेन्सी हुनुहुँदैन"
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -युद्ध रोक्नुहोस् वा फुटबल छैन
'डोनेट्स्क नो-शो' को रूपमा सरल भनिन्छ
फ्रेडले6शख्त खेलाडीहरूमध्ये एक थियो जसले जुलाई 2014 मा डोनेट्स्क फर्कने अस्वीकार गरे र रूस र यूक्रेनको संकट बढ्यो।
पूर्वी यूक्रेनको युद्धले शख्तको अरबपति मालिक रिनत अकममुमोको कारण आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन सकेन खेलाडी प्रतिबद्धता, उहाँको कोइला खनन र धातुकर्म उद्यम पूर्वी विद्रोह-क्षेत्रहरूमा। फ्रेड सहित उनको छैटौं फुटबलरहरूलाई आफ्नो क्लब छोड्ने धम्की थियो भने, उनले आफ्नो स्विच गर्न निर्णय गरे "घर" पूर्वी शहर खार्किव को स्थान, आफ्नो मूल डोनेट्स्क को 250km उत्तर-पश्चिम।
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -औषधिको लागी सकारात्मक परीक्षण
फ्रेड एक पटक एक औषधि परीक्षण असफल भयो। २०१ Cop कोपा अमेरिकाका समयमा संकलन गरिएको नमूनामा उनी डायरेटिक हाइड्रोक्लोरोथिजाइडका लागि सकारात्मक परीक्षण गरे।
दोषी हुँदा, फ्रेडले एक वर्षको निलम्बन प्राप्त गर्यो जुन टूर्नामेंटमा पुन: प्राप्त गरिएको थियो।
अझ, उसले २०१ he-१– सत्रको पहिलो आधा खेले पछि, विश्व-डोपिंग एन्जेसीले दुई वर्षको निलम्बनको लागि पुनरावेदनको लागि अपील गर्‍यो। तर एक लामो प्रक्रिया पछि, फ्रेड अन्ततः मार्च र जुलाई २०१ between बीच चार महिनाको लागि निलम्बन गरियो।
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उहाँको शहर
के तपाईं 2014 फीफा विश्वमा ब्राजिलको सबैभन्दा ठूलो हार हार सम्झनुहुन्छ? यदि हो, त्यसो भए तपाईंले जान्नुपर्छ कि घटना बेलो होरिजन्टेमा, एउटा शहर जहाँ फ्रेड जन्मिएको थियो र बिरुवामा भयो।
आदर्श रूप मा, बेलो होरिजन्टेले 1950 र 2014 विश्व कपमा म्याचहरूको मेजबानी गर्यो। शहरले दुई टूर्नामेंटको बीउज्यालो कहिल्यै - इङ्गल्याण्डको 1-0 1950 मा युएसएलाई पराजित गर्यो र7मा ब्राजिलको 1-2014 अर्ध-फाइनान्समा जर्मनीलाई लटपटिरहेको छ.
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -संयुक्त अधिग्रहण पछि चोट
फ्रेडमा हस्ताक्षर गरेपछि मचेस्टर युनाइटेडमा खुसी थियो। तर केही हप्ता पछि, क्लबले डरलाग्दो पछाडि छोडेर छोडेपछि ब्राजिलका मिडफिल्डरले रक्षात्मक मिडफिल्ड प्रवर्तकबाट भारी स्लाइड टेलले प्राप्त गरे Casemiro एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण सत्रको दौडान।
फ्रेड पछि ब्राजील प्रशिक्षण सत्रको दौडान मेडिकल उपचार प्राप्त गरिएको थियो। उनको दुखाइले मैनचेस्टर युनाइटेड प्रशंसकलाई चिन्तित गर्यो।
फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -नाम तथ्य
फ्रेड सहित धेरै ब्राजिलका फुटबल खेलाडीहरूले आफ्नो शर्टहरूको पछाडि छोटो र सरल नामहरूसँग सहमत गरेका छन्। जब फ्रेडले आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर सुरू गरे, फ्रेडले आफ्नो पूरा नाम प्रयोग गर्न नसक्ने तर यसलाई उपनाममा छोटो पार्ने निर्णय गरे "फ्रेड".
ब्राजिलमा पहिलो नाम र उपनामहरूको प्रयोग नयाँ छैन। यो ब्राजीलियाली संस्कृतिमा एक परम्परा हो जुन औपनिवेशिक समयहरूमा फर्किएको मिति। शर्टमा उपनामहरू प्रयोग गरी व्यक्तित्वको चिन्हको रूपमा देखा पर्दछ। अब हामी तपाईंलाई केहि उदाहरण दिन्छौं।
ब्राजिलका सबैभन्दा लोकप्रिय छोरा, एडसन एन्ट्रेन्स डो नास्मेन्टियो, उपनाम 'Pele '। दोस्रो, पूर्व Ballon d'Or विजेताहरूको व्यक्तिगत उपनाम काका र रोनाल्डिन्हो हो Ricardo Izecson dos Santos Leite र रोनाल्डो डी एसेस मोरारा.
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फ्रेड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.